Soo iibso budada Allylestrenol (432-60-0) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / Dufanka Allylestrenol (432-60-0)
SKU: 432-60-0. Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmida budada Allylestrenol (432-60-0), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Allylestrenol, magaca Gestanin iyo Turinal oo ka mid ah kuwa kale, waa hormarin hormoon ah oo la xiriirta progesterone oo lagu siiyey hanjabaad iyo dib-u-dhicin, iyo ka hortagga foosha shaqada. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo maqnaansho la'aanta progesterone, isticmaalka noocan oo kale ah laguma talinayo.
Allylestrenol video budada
Budada Allylestrenol Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Allylestrenol
Formula kelli: C21H32O
Allylestrenol wareega budada
Magacyada kiimikada: budada Allylestrenol
Magacyada Shirkadaha: Gestanin iyo Turinal iyo kuwa kale, budada Allylestrenol, budada Gestanin, budada Turin, 432-60-0
Isticmaalka budada Allylestrenol
Qaado Allylestrenol budada (CAS 432-60-0) afkii sida loogu talagalay, waxaa la qaadan karaa ama la siin karaa cunto. Daawadan ayaad kula qaadan kartaa cuntada si looga hortago GI. Raac tilmaamaha oo dhan khariidadda alaabta. Haddii aadan hubin wax macluumaad ah, la tasho dhakhtarkaaga ama farmashiistaha.
U sheeg dhakhtarkaaga haddii xaaladdaadu sii socoto ama sii xumaato ama aad yeelato calaamado cusub. Haddii aad u maleyneyso inaad qabtid dhibaato caafimaad oo culus, isla markiiba caawimo caafimaad raadso.
Budada Allylestrenol waxaa ugu fiican heerkulka qolka fog ee laga helo iftiin toos ah iyo qoyaan. Si looga hortago waxyeellada daroogada, waa inaadan ku kaydin budada Allylestrenol ee musqusha ama barafeeyaha. Waxaa jiri kara noocyo kala duwan oo budada Allylestrenol ah oo laga yaabo inay leeyihiin baahiyo kaydin oo kala duwan. Waa muhiim inaad had iyo jeer baartid baakada wax soo saarka ee tilmaamaha kaydinta, ama weydii farmasigaaga. Badbaadada, waa inaad ilaalisaa dhammaan daawooyinka ka fog carruurta iyo xayawaanka guriga.
Waa inaadan bi'in Allylestrenol budada musqusha ama ku daadi daadi haddii aan laguu sheegin. Waxaa muhiim ah in si habboon loo tuuro sheygan marka uu dhacayo ama aan loo baahneyn. La tasho farmashiistaha wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan sida si ammaan ah looga tuuro alaabtaada.
Waa maxay qiyaasta budada Allylestrenol
MACLUUMAAD MACLUUMAAD WAXAA LAGA HELAA MACLUUMAAD KU HELI KARTAA IYO SHARCI
WAXAA LOO ISTICMAALO SIDA LOO ISTICMAALO SIYAABAHA LOO BIXINAYO AMA WAXYAALAHA CAAFIMAAD EE KALE
Waa maxay qiyaasta budada Allylestrenol (budada Gestanin) ee qof weyn?
Dadka waaweyn: 5 mg afka ah saddex jeer maalintii maalmaha 5-7.
Waa maxay qiyaasta budada Allylestrenol ee ilmo?
Qiyaasta daawada laguma dhicin bukaanka carruurta. Waxay u noqon kartaa badbaado cunuggaaga. Had iyo jeer waa muhiim inaad si buuxda u fahamtid ammaanka daroogada intaan la isticmaalin. Fadlan kala tasho dhakhtarkaaga ama farmashiistaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Sidee loo heli karaa budada Allylestrenol?
Budada Allylestrenol waxaa lagu heli karaa foomamka qiyaasaha soo socda iyo xoogsashada:
Tablet, Afku: 5 mg.
Maxaan sameeyaa haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah ama xad dhaaf ah?
Haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah ama xad dhaaf ah, waxaad wacdaa adeegga deg-degga ah ee degaankaaga ama tag rugta gurmadka ee kuugu dhow.
Haddii aad seegto qiyaasta budada Allylestrenol, u qaado sida ugu dhakhsaha badan. Si kastaba ha noqotee, haddii ay ku dhowdahay inaad qaadato qiyaastaada xigta, ka boodi qiyaasta la seegay oo qaadashada qiyaastaada caadiga ah sida jadwalka. Ha qaadan qaadashada laba jeer.
Kooxda Caafimaadka Caafimaadka ma bixiso talo bixin caafimaad, daaweyn ama daaweyn
Sida ay budada Allylestrenol u shaqeyso
Budada Allylestrenol waxay la mid tahay dhismaha waxayna u shaqeysaa progesterone. Progesterone waxay wadaagaan ficilada fayo-dhawrka ee barnaamijyada progestins. Progesterone waxay ku xidhan tahay dukaamada progesterone iyo estrogen. Unugyada bartilmaameedka ah waxaa ka mid ah habka dheddig-jinsiga ee haweenka, qanjidhada naasaha, hypothalamus, iyo pituitary. Marka la xakameynayo daaweeye, progestins sida Progesterone waxay yareyneysaa inta jeer ee sii deyneysa gonadotropin sii daaya hoormoonka (GnRH) ee hypothalamus iyo caajis ah horey u-fuuq-baxa (Luteining hormone). Haweenka qaba hindhinkaraha qanjirada ku filan, progesterone waxay u beddeshaa endometrium fara badan oo loo yaqaan 'secretory'. Progesterone waxay lagama maarmaan u tahay horumarinta unugyada go'aaminta waxayna lagama maarmaan u tahay inay kor u qaaddo hindise-celinta loogu talagalay soo-saarista embriyaha. Marka embriyaha la geliyo, progesterone waxay ku dhaqmaysaa si ay u ilaaliso uurka. Progesterone waxay sidoo kale kicisaa koritaanka nudaha alveolar ee naasaha iyo nasiyo murqaha laf-dhabarta. Waxay leedahay firfircoonida estrogenic iyo istratijiyada yar.
Isugeynta glucuronide iyo sulfate ee pregnanediol iyo pregnanolone ayaa laga saaraa kaadida iyo xitaa. Dheef-shiid kiimikaadka Progesterone oo laga soo saaro xaamuuska ayaa laga yaabaa in la mariyo dib-u-warshadeynta enterohepatic ama laga saaro saxarada. Dheef-shiid kiimikaadka Progesterone ah ayaa badanaa laga saaraa kelyaha.
Budada Allylestrenol waxaa loo maamulaa bukaanka kuwaas oo ku dhacay dhicin badan, foosha shaqada ama qanjirka 'prostatic hyperplasia'. Daroogada ayaa faragelinaysa hoormoonka mas'uulka ka ah sii daynta gonadotropin waxayna hoos u dhigtaa koritaanka hormoonada luteining pre-ovulatory hormone.
Waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga oo aad heshid baaritaan caafimaad oo buuxa ee gobolkaaga uurka iyo xaalado caafimaad oo kale oo laga yaabo inay hor istaagaan uur qaadasho guul ka hor. Waa inaad dhakhtarkaaga ka dhaadhicisaa wixii cudurro ah ee hore u jirey ama cudurrada aad qabtid, xasaasiyad kasta oo daawo ama cunto, ama haddii aad ku jirto kiniin hormoon ah, daawooyinka dheeraadka ah ama daawooyinka kale ee dhakhtarku qoro.
Waa inaad daawooyinka u qaadataa taxadar iyo sida takhtarkaaga u sheego gaar ahaan haddii aad tahay bukaanka sonkorowga, xannuunada, suuxdinta, neefta ayaa leh cudurada wadnaha, beerka ama beerka, ama haddii aadan u adkeysan karin gulukoos.
Waxaa jiri kara waxyeello waxyeelo leh oo ay ku jiraan matag iyo lallabbo, madax xanuun, maqaarka oo maqaarka ah sida finan, finan, casaan, barar dhuunta, carrabka, dibnaha, aragga cilladda ah iyo dawakhaad, xanuunada caloosha iyo xanuunka caloosha, caloosha ama shuban, isbeddel cadaadiska dhiigga. Waa in aad ka fogaato wadista baabuurka ama aad dibedda u baxdo si sax ah markaad qaadato daawada.
Budada Allylestrenol (CAS 432-60-0)
Suuq geynta Allylestrenol
Maadada Allylestrenol ma leedahay Saameyn Waxyeello ah
Budada Allylestrenol waxaa loo isticmaalaa daaweynta, xakameynta, ka-hortagga, iyo horumarinta cudurada soo socda, xaaladaha iyo astaamaha:
-Dhibaatada uurka oo soo noqota
-Beerignirida prostatic hyperplasia
- Dhaawac ilmo dhicis ah
- Ciyaalka ilmo iska soo ridid
-Dhibaatada korriinka ilbaxnimada
Budada Allylestrenol ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin aan halkan ku taxaluqin.
Dhibaatooyinka kale ee Gestin (budada Allylestrenol) waxaa ka mid ah kuwa hoos ku qoran. Haddii mid ka mid ah dhibaatooyinkaasi ay sii socdaan, ama ka sii daraan, waa inaad isla markiiba la tashataa dhakhtarkaaga.
Waxaa la ogaaday in dhallaanka dhashay hooyooyinka qaadatay daawadani ay yeelan karaan waxoogaa ka sarreeya miisaanka caadiga ah, hase yeeshee tan looguma fekereynin inay tahay ammaan.
Sida loo iibsado budada Allylestrenol laga soo qaado AASraw